Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Khayre oo dalbaday in Soomaaliya Xayiraada Hubka laga qaado | SAHAN ONLINE
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre oo dalbaday in Soomaaliya Xayiraada Hubka laga qaado
WASHINGTON – Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey Shirka Golha guud ee QM ee magaalada New York ayaa kaga hadlay dhinacyada Ammaanka,Siyaasadda,dhaqaalahamdagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab,Arrimaha bini’aadanimada,wuxuuna taageero dheeraad ah ka dalbaday caalamka.
Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa ka dalbaday beesha caalamka in dalkiisa laga qaado xayiraadda saaran ee dhinaca hubka si buu yiri dowladu uga guuleysato dagaalka ka dhanka ah Kooxaha Argagaxisada oo khatar ku ah horumarka dalka.
Soomaaliya waxay soo martay oo waayo joog unoqotay, colaado,abaaro,macluul iyo amni xumo, marka waxaan fahamsanahay ahmiyadda ay nabaddu u leedahay Dalka Soomaaliya haatan horumar ayaa ku sii talaabsanaya”,Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Wuxuu soo hadal qaaday caqabado uu sheeegay in ay ka hor gudban yihiin Dowladda Soomaaliya,taasi oo u baahan in Dowladda laga caawiyo.
Waxaa jira caqabado ku hor gudban Dowladda oo ah dhaqaale xummo,waa ay adagtahay in laga gudbo aqabadahaasi hadii aan loo heli taageero dhaqaali iyo maalgashi Caalami ah,argagixisada ayaa ah caqabadda ugu weyn ee dalka haysata,sida ururada ISIS iyo Alqaacidda loona baahan yahay in wax laga qabto”,ayuu intaasi ku daray Raiisul Wasarae Khayre.
Khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ra’iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku sheegay in Dowladda Soomaaliya ay waddo qorshe ku aadan dhismaha ciidan Qaran balse caqabadda jirta ay tahay xayiraadda Hubka ah ee saaran Soomaaliya,taasi oo uu ka dalbaday Caalamka in Soomaaliya laga qaado cuno qabatayntaasi, si loogu guuleysto xasilinta Dalka,isagoo AMISOM uga mahad naqay guulaha laga gaarey dagaalka lagula jiro Alshabaab.
Dowladda Federaa;lka Soomaaliya ayuu sheegay in Ra’iisul Wasaare Khayre in ay fursada siisay dhalinyarada iyo haweenka in ay ka qeyb qaataan hanaanka Dowladnimo iyo hogaaminta dalka,isagoo tusaale ahaan u soo qaatay Alla ha unaxriistee Wasiir Cabaasi C/llaahi SHeekh Siraaji oo ahaa Wasiir dhalinyaro ahaa,taasi oo uu ku sheegay in ay muujinayso in Dowladdu ay ka qeyb gelinayso dhalinyarada iyo haweenka dhismaha Dowladnimada.
Abaaraha soo noqnoqday iyo waxbarasho la’aanta ayuu ku sheegay in ay qeyb weyn ka qaateen dhibaatooyinka dalka kajira kuwaasi oo dad badan ku qasbay in dalka ay ka cararaan,raiisul Wasaaraha ayaa ku celceliyay in baahiyo weyn loo qabo taageero dhin kasta leh in QM iyo Beesha Caalamka ay ka hesho Soomaaliya.